Bangiga Dhexe ee Soomaaliya guddoomiye maka noqon karaa qof ajnabi ah? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Raadiiyoow Muqdishoow
Image caption Silsilad Weyne, Bangiga Dhexe ee Soomaaliya
"Qodobka 130-naad, qeybtiisa A ee xeerka Bangiga Dhexe ayaa mamnuucaya in qof aan Soomaali ahayn uu qabto xilka guddoomiyaha bangiga" Ayuu yiri Yaxye Caamir.
Balse golaha wasiiradda ayaa baarlamaanka u gudbiyay wax ka badalka xeerka Bangiga Dhexe, gaar ahaan qodobka 130-aad, waxaana war qoraal ah lagu yiri "Iyadoo aan wax loo dhimeyn Sharciga 130aad, ee 22/04/2012 qodobka 12aad, farqadiisa 1aad, xeerka (a) waxaa loo ogolaaday guddiga xulista xubnaha guddiga Agaasinka Bangiga dhexe ee Soomaaliya in ay soo xuli karaan qof kastaa oo ugu dhibco sareeya, Karti ahaan, Aqoon ahaan, iyo hufnaan intaba guddoomiyaha Bangiga dhexe ee Soomaaliya".
Agaasimaha SIPAM oo aan weeydiinay su'aal ahayd waxa laga yeelayo haddii Bangiga Adduunka iyo hay'adaha maaliyadda caalamiga ah ay dowladda Soomaaliya shuruud kaga dhigaan in qof ajnabi ah xilkan loo dhiibo si lacagaha la siinayo loogu aamino ayuu yiri "ma qabo in ay jirto horta shuruudaas, balse haddii ay jirto waa midab takoor, waana arrin lagu qabsan karo Bangiga Adduunka".
1. Waa inuu noqdaa qof hufan oo:
3.Waa inuu maamul ka soo qabtay hey'ado maxali ah iyo dowli ah….